हिजो अरूलाई कुरीकुरी गर्ने प्रधानमन्त्री आज नाङ्गै हिडेको छः गगन थापा - Marganugami Daily
Marganugami Daily Headline1 Main News National Politics राजनीति स्थानीय हिजो अरूलाई कुरीकुरी गर्ने प्रधानमन्त्री आज नाङ्गै हिडेको छः गगन थापा
हिजो अरूलाई कुरीकुरी गर्ने प्रधानमन्त्री आज नाङ्गै हिडेको छः गगन थापा
काठमाडौं, ३१ वैशाख । नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले हिजो राष्ट्रवादको जिम्मा लिएको दाबी गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज ना·ै हिँडेको आरोप लगाएका छन् । भारतीय प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीको दुई दिने नेपाल भ्रमणको प्रस· निकाल्दै सोमबारको संसद बैठकमा थापाले स्वघोषित राष्ट्रवादी सरकारले मोदीको स्वागतमा अनावश्यक चाकडी गरेको बताए ।
‘प्रधानमन्त्री महोदयलाई हिजो चुनावको प्रचारप्रसारका बेला मैले मात्रै राष्ट्रवादको जिम्मा लिएको छु, बाँकी रहेका सबै पार्टीका सबै नेता नेपाल बेच्न उद्धत छन् भनेर भनेको क्षण सम्झाएको छु , संसदमा थापाले भने ‘हिजो अरूलाई कुरीकुरी गरेको थियो । आज नाङ्गै हिडेको कुरा हामीले देखाउनुपरेको छ । थापाले भारतले अब कहिल्यै नाकाबन्दी लगाउँदैन भनेर प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठाए । उनले प्रधानमन्त्रीले भारतको जिम्मा लिएर बोलिरहँदा प्रधानमन्त्रीको ‘घुँडामा भ्वाङ पर्यो भनेर सोध्न पाउने कि नपाउने ?, भन्दै प्रश्न गरेका हुन् । उनले विगतमा प्रधानमन्त्री ओलीले शेरबहादुर देउवाको भ्रमण र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड को भ्रमणलाई सि·डा खान गएको र घुँडा टेक्न गएको रूपमा अर्थ्याएको प्रस· समेत कोट्याए ।
‘आफूले गरे पुण्य अरुले गरे पाप , थापाले टिप्पणी गरे । थापाले भारतीय प्रधानमन्त्री नेपालमा तीर्थ यात्राका लागि आएका कारण तीर्थयात्रा सफल भएको बताए। विश्वासको मत लिँदा गर्दा गर्जिएको प्रधानमन्त्री । हिजो (संसदमा) शब्द खोज्दै गरेको प्रधानमन्त्री, थापाले भने, ‘सुशील कोइरालालाई अम्पसारवादी भन्ने अडानले नाकाबन्दी लाग्यो । अहिले सत्तासिन सांसदले सुरक्षा दिन सकेन भनेको छ । भारतीय राष्ट्रपति आउँदा उनले तामझाम हेर्दा लम्पसारवादी लागेको छ भनेको थियो । पहिला घुँडामा घाउ भयो भनेको थियो । हिजो भारतको जिम्मा लिएर बोल्दा घुँडामा भ्वाङ प¥यो भन्न पाउने कि नपाउने? ।
उनले प्रदेश २ को मुख्यमन्त्रीको धारणा भने निन्दनीय भएको बताए । ‘भारतको मुख्यमन्त्रीले मुसलमान माथि विभेद भएको छ भन्दैन , थापाले भने, ‘हाम्रो मुख्यमन्त्रीको धारणा निन्दनीय छ । थापाले एमाले सांसद बस्नेतको प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीलाई झण्डाका विषयमा तालिम दिने कुरा गरेको प्रति समेत आपत्ति जनाए । ‘नेपालको संविधानले परराष्ट्र मामिला केन्द्रलाई जिम्मा दिएको छ । तालिम परराष्ट्र मन्त्रीलाई दिने भन्न पाउने कि नपाउने ?, थापाले भने ।
‘नाकाबन्दी बिर्सेको छु भन्न पाउने कि नपाउने, थापाले भने, ‘हिजो भारतीय दूतावास अगाडि गएर एमालेले प्रदर्शन गर्न पाउने । अहिले पार्टी कार्यालयमा ब्यानर राख्न पाउने हो कि होइन? यो कस्तो लम्सवादार हो । यो कस्तो चाकडी हो ।
#Headline1 #Main News #National #Politics #राजनीति #स्थानीय